Iprofayile yenkampani | Ulwazi malunga nenkampani Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd., izabelo zokutshintshana Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Iphuhliswe liqela loyilo lwehlabathi lwehlabathi elinamaqela angama-50 ngaphezulu kwamava kwi-CMOS-MEMS sensor kunye nenkqubo yoyilo, i-Sunshine ibonelela abathengi ngezixhobo ezibonakalayo kwimveliso, ubungakanani kunye nokudityaniswa. Ukungeniswa kweemveliso zenzwa ye-IR ekhokelela kubuchwephesha beCOMS-MEMS kunye nokuthembeka okugqwesileyo kunye nokungaguquguquki kubandakanya inzwa yeqondo lobushushu elingadibaniyo, isivamvo se-NDIR, isivamvo somfanekiso oshushu, kunye nokunxibelelana komatshini womntu we-IR.
Ilanga ligcina ubudlelwane obusondeleyo kunye nabathengi kunye nobuchwephesha bobuchwephesha kwiimveliso zoluvo lwe-IR kunye nezisombululo zokwenza uyilo lwabasebenzisi lufikeleleke ngakumbi, lubhetyebhetye kwaye lufikeleleke. Iimveliso ezintsha zenzwa ye-Sunshine ene-portfolio ebanzi ivumela abathengi ukuba bafezekise iimarike ezahluka-hlukeneyo ezikhula ngokukhawuleza njengezixhobo ze-smart, ii-elektroniki ezihambayo kunye netekhnoloji yamandla aluhlaza, kwaye zikhokelele ekusebenzeni okuphuculweyo njengokuchaneka okungcono, izinto ezincinci zepheripherali, indawo encinci yenkqubo kunye ixabiso eliphantsi.
Ubungcali bokuyila kwelanga kunye notyalo-mali oluqhubekayo kwi-R & D luqinisekisa ukusebenza kunye nomgangatho weemveliso ezihambelana okanye ezigqithileyo kwezo zibonelela ngeyona nto iphambili kubaboneleli be-IR. Umgangatho kunye nokuthembeka kuphezulu kuluhlu lwezinto eziphambili eSunshine ngawo onke amaxesha. Ilanga lizabalazela ukuba lelinye lehlabathi elikhokela ababoneleli be-IR ngokunikezela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo. Ngumgaqo-nkqubo ke ngoko ukuba iLanga liqhubeke nokuphucula ubuchwephesha kunye neenkqubo zokusebenza kumzamo oqhubekayo wokuhlangabezana nokugqithisa kulindelo lwabathengi.